UGoogle ubhengeza i-Wear OS 2.1 ngophuculo kuyilo nakulawulo lwezaziso | I-Androidsis
UGoogle ubhengeza i-Wear OS 2.1 ngoyilo kunye nokuphuculwa kolawulo
Kangangexesha elithile ukuba yinxalenye, kubonakala ngathi abafana abavela kuGoogle babuyele ukuza kuthathela ingqalelo inkqubo yokusebenza kwenkampani yeewatchwatches, inkqubo yokusebenza ethi kubonakala ngathi ilahliwe yingxilimbela yokukhangela kule minyaka mibini idlulileyo.
Utshintsho lokuqala silubonile kwigama leqonga, elithi isuke ekubizeni ngokuba yi-Android Wear iye kwi-Wear OS, intshukumo ejolise ngokucacileyo kubasebenzisi be-iPhone abangakholelwa ukuba iimodeli ezilawulwa yile nkqubo yokusebenza azihambelani ne-iOS.
Kodwa ukongeza, ubeke iibhetri, wahamba ukuphucula ezinye zeempawu esele zibonelelwe, Ukongeza ukongeza ezintsha. Intshukumo yamva nje yenkampani ibonakala ngathi iqinisekisa umdla kaGoogle kwi-Wear OS kuba sele inike uhlaziyo olutsha, uhlaziyo olujolise ekuphuculeni ulawulo esizenzayo ngezaziso.
1 Ukufikelela ngokulula kwizaziso
2 Umncedisi kaGoogle ngoku uyasebenza ngakumbi
3 Uphuculo lukaGoogle Fit
Ukufikelela ngokulula kwizaziso
Xa kuziwa ekunxibelelaneni nesaziso, ngoku kulula kakhulu, kuba sinakho balahle bonke kunye. Ukuba sifuna ukuphendula enye yazo, kufuneka siklikhe kuyo ukuze siphendule ngokukhawuleza. Ukuba sifuna ukufikelela kwiVenkile yokuDlala okanye Fumana isixhobo sam, kuya kufuneka sisilayishe ezantsi iscreen.
Umncedisi kaGoogle ngoku uyasebenza ngakumbi
Abancedisi abakho kuphela ukwenza imisebenzi esiyicebisayo, kodwa kufuneka nabo Ncoma imisebenzi eqhelekileyo usuku nosuku okanye ukufika ngexesha. Ukuba, umzekelo, ibhaqa ukuba sikwisikhululo seenqwelomoya, iyakusibonisa indawo esikuyo ngenqwelomoya kunye neenkcukacha zokubhukisha kwethu ehotele.
Uphuculo lukaGoogle Fit
Ukubonisa ukuzibophelela kukaGoogle kwezempilo, ukufikelela kwidatha kaGoogle Fit, jonga inqanaba leenjongo zethu okanye ngokulula qalisa ukuzilolonga, kufuneka nje uswayiphe ngasekhohlo.
Le misebenzi mithathu mitsha iya kuqala ukubakho ukusukela kwinyanga ezayo, kwaye iya kufika ngohlobo lwesaziso esivela kwisiphelo sethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » UGoogle ubhengeza i-Wear OS 2.1 ngoyilo kunye nokuphuculwa kolawulo
Ezona zicelo zilungileyo zokwenza ngokwezifiso i-Android
Imidlalo emi-5 ye-Android ukonwabela le mpelaveki